Diyaaradda Hawaiyan oo magacawday laba agaasime maamul oo cusub
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Jabinta Hawaii » Diyaaradda Hawaiyan oo magacawday laba agaasime maamul oo cusub
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Jabinta Hawaii • News • Dadka • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Astaanta Diyaaradaha Hawaiyan. (PRNewsFoto)
Diyaaradda Hawaiyan ayaa maanta u magacawday Alanna James agaasimaha maamulka ee dadaallada waaridda. Doorkan cusub, James wuxuu hogaamin doonaa barnaamijyada deegaanka, bulshada iyo maamulka (ESG) ee guud ahaan Hawai'i duulimaadkeeda ugu weyn uguna muddada dheer, kormeeraya yoolkeeda si loo gaaro qiiqa kaarboon eber saafiga ah marka la gaaro 2050, horumarinta kala duwanaanshaha iyo dadaallada ka mid noqoshada, iyo kuwa kale. dadaallada joogtaynta.
Diyaaradda Hawaiian waxay magacawday agaasimeyaal cusub oo maamul ee dadaallada joogtaynta iyo xiriirka maalgashadayaasha.
Hawaiyan Airlines oo xoojinaysa dadaalkeeda joogtaynta iyada oo diiradda la saarayo arrimaha isbeddelka cimilada sidoo kale.
Hawaiian ayaa ballan qaaday in ay dhimi doonto qiiqa ka imaanaya duullimaadyada caalamiga ah ee ka sarreeya heerarka 2019.
"Fahamka ballaadhan ee Alanna ee hawlgalladayada iyo habkeeda istaraatiijiyadeed waxay noo oggolaanaysaa inaan dardar-gelinno faylalkayaga sii kordhaya ee mashaariicda ESG si aan u sii wadno inay naga dhigaan shirkad diyaaradeed oo sii waara," ayuu yiri Avi Mannis, madaxweyne ku-xigeenka sare ee suuq-geynta ee Hawaiian Airlines.
James waxa uu ahaa maamulaha maamulka ee xidhiidhka maalgeliyayaasha Hawaiian ilaa badhtamihii 2019. Tan iyo markii ay ku soo biirtay diyaarada 2011, waxay qabatay jagooyin istiraatijiyad iyo isbeddel, qorsheyn maaliyadeed iyo falanqayn, waxayna hore u kormeertay shirkadihii hore ee 'Ohana ee hawlgalka Hawaiian turboprop. Kahor Hawaiian, waxay ka shaqeysay istiraatiijiyadda iyo horumarinta ganacsiga ee TACA Airlines ee El Salvador. James waxa uu shahaadada koowaad ee cilmiga dhaqaalaha ka qaatay Dartmouth College, iyo shahaadada mastarka ee maamulka ganacsiga oo uu ka qaatay IESE Business School ee magaalada Barcelona, ​​Spain.
Alanna James, agaasimaha maamulka ee dadaallada waaridda
"Aad ayaan u sharfay waxaanan rajaynayaa inaan horumariyo shaqada xiisaha leh ee ESG ee kooxdeena markaan balaadhino ganacsigeena annagoo diirada saarayna hufnaanta iyo joogtaynta," James ayaa yidhi.
Hawaiian waxay si xoog leh u xoojinaysay dadaalkeeda sii jiritaankeeda, sida lagu xusay shirkadda Warbixinta Shirkadda Kuleana ee 2021. Wax ka qabashada isbedelka cimilada ayaa weli ah mid ka mid ah mudnaanta ESG ee Hawaiian. Shirkaddu waxay ballan-qaadday inay gaadho 2050-ka qiiqa kaarboon-ka saafiga ah iyada oo loo marayo maal-gashi joogto ah, duullimaad hufan, ka-baxsan kaarboon, iyo u doodista warshadaha ee dib-u-habaynta xakamaynta taraafikada hawada iyo horumarinta shidaalka duulista iyo kobcinta joogtada ah. Laga bilaabo sanadkan, Hawaiian waxa ay ballan qaaday in ay dhimi doonto qiiqa ka imanaya duullimaadyada caalamiga ah ee ka sarreeya heerarka 2019, iyada oo la raacayo Hay'adda Duulimaadyada Rayidka Caalamiga ah ee Kaarboonka Kaarboonka iyo Dhimista Qorshaha Duulimaadyada Caalamiga ah (CORSIA).
Hawaiian ayaa sidoo kale ku dhawaaqday magacaabista Ashlee Kishimoto, maamulaha maamulka Hawaay ee hawlgallada ilaha aadanaha tan iyo 2018, agaasimaha maamulka ee xiriirka maalgashadayaasha, laga bilaabo maanta. Kishimoto, oo horay madax uga ahaa waaxda xiriirka maalgashadayaasha intii u dhaxeysay 2013 iyo 2017, ayaa mas'uul ka noqon doona maaraynta xiriirka Hawaiian ee maalgashadayaasha iyo daneeyayaasha kale ee maaliyadeed.
Ashlee Kishimoto, agaasimaha maamulka ee xiriirka maalgashadayaasha
"Asalka warbixinta maaliyadeed ee xooggan ee Ashlee waxay siin doontaa maalgashadayaasha aragti cad oo ku saabsan aragtidayada maaliyadeed marka aan ka soo baxnay masiibada COVID-19," ayuu yiri Shannon Okinaka, madaxa dhaqaalaha ee Hawaiyan Airlines.
Marka laga soo tago khibradeeda xiriirka maalgashadayaasha, Kishimoto waxa ay ahayd agaasimaha warbixinta SEC iyo u hoggaansanaanta SOX, iyo agaasimaha maamulka ee hanti dhowrka shirkadaha. Waxay shahaadada koowaad ee jaamacadda ee xisaabaadka ka qaadatay Jaamacadda San Francisco.